कोमल वलीलाई लिएर एमालेमा नेतादेखि कार्यकर्ता सम्ममा मच्चियो भाडभैलो « News24 : Premium News Channel
कोमल वलीलाई लिएर एमालेमा नेतादेखि कार्यकर्ता सम्ममा मच्चियो भाडभैलो
काठमाडौं । लोक गायिका तथा सञ्चार कर्मी कोमल वलीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने विषयमा एमाले नेतादेखि कार्यकर्ता सम्ममा तहल्का मच्चिएको छ ।
वलीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेदेखि नै अझैसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टी आउने क्रम जारी छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश ५ बाट महिला सिटमा कोमल वलीस निर्विरोध भएका छन् ।
वलीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने विषयमा एमाले सचिवद्वय विष्णु पौडेल र योगेश भट्टराईबीच पनि भनाभन भएको छ । उम्मेदवारको टुंगो लगाउन अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भट्टराई र प्रदेश नम्बर ५ का इन्चार्जसमेत रहेका पौडेलबीच भनाभन भएको हो ।
स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार नोट अफडिसेन्ट लेखेपछि पौडेलले भट्टराई र भुसाललाई इंगीत गर्दै भनेका थिए, ‘५ नम्बर प्रदेशको इन्र्चाज म हो । मैले जे भने त्यो हुन्छ । अरुले चासो धेरै नराखेको राम्रो ।’ त्यसपछि नोट अफडिसेन्ट लेखेका भट्राईले पौडेललाई मुखभरीको जवाफ फर्काएका थिए । ‘हामीलाई पनि थाह छ, कसको कनेक्सन कहाँ छ भनेर । लोकमान कार्कीदेखि एनसेलसम्म कहाँ–कहाँ के भएको छ सबै थाह छ । हामीलेपनि हिसाब राखेका छौ । ठूलो कुरा नगरे हुन्छ । एक दिन सबै बाहिर आउँछ । सबै हिसाब असुलिन्छ’ भट्टराईको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
एमाले स्थायी समितिको बैठकले ५ नम्बर प्रदेशबाट कोमल वलीको नाम सिफारिस गरेपछि नेता कार्यकर्ताहरुले समेत सामाजिक संजालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका थिए। एमालेको भात्रि सगंठन प्रेम चैतारीको महसचिब राजेश राईले पनि वलीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएकोमा आफ्ने फेसबुक लेखेका छन्- यो राष्ट्रिय सभा भनेको के रहेछ ? जहाँ क.ठाकुर गैरे जस्ता फालिन्छन्, र कोमल वलीलाई लगिन्छ । ठाकुर गैरेले परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि रगत-पसिना बगाउदै गर्दा वली दिदिले राप्रपामा बसेर गाइरहेकी थिइन्, ‘पोइला जान पाम्, शिब पोइला जान पाम् ।’ तपाईले ‘पोइला जान पाम्’ मार्फत जागरणको लागि गर्नु भएको काम, समस्त महिलाहरुलाई पोइला जानका लागि जगाउनुभएको उत्प्रेरणा र,यस्तै प्रकारको महान् कामको निम्ती हाम्रो गौरवशाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्मान गरेको छ । फरक यति हो, ठाकुर गैरेले केही नपाए पनि एमालेमा बसेर रुपान्तरण र परिर्वतनका लागि लडिरहन्छन् । दिदिले नपाएको भए पार्टी छोडर जान्थ्थिन् । बधाई है दिदि !!
टिकट पाएपछि यसरी सामाजिक सञ्जालमा निकै आलेचित भएका थिइन । यसरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचन बढिरहदा उनले भनेका थिइन – ‘मैले टिकट पाउँदा कोही रिसाउनु पर्ने अथवा आक्षेप लगाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ म । मैले टिकट पाउनै पर्छ भनेर भनेको पनि थिइनँ । ५ नम्बर प्रदेशबाट महिलाहरुमा मेरो नाम सबैभन्दा माथि सिफारिस भएको थियो । म यो पदको लागि अयोग्य छु जस्तो लाग्दैन । यदि म अनुपयुक्त भएको भए मलाई टिकट नदिएको भए पनि हुन्थ्यो । म आफूलाई यसको लागि योग्न नै ठान्छु । विरोध गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ ।’